जहाँ तपाईं चित्रमा वर्तमान कुनै पनि संकेत को छुटकारा प्राप्त गर्न आवश्यक एक अवस्था, त्यहाँ अक्सर पर्याप्त छ। उदाहरणका लागि, तपाईं फोटो आफ्नै गरे एउटा विज्ञापन कम्पनी लोगो वा अझै पनि एक मिति हटाउन आवश्यक पर्दछ। मेटाउन अनावश्यक वस्तु हाल विद्यमान छवि सम्पादक को लगभग कुनै पनि को हालतमा हुन सक्छ। त्यसैले, कसरी छवि देखि लेबल हटाउन?
त्यस अवस्थामा, लेबल अन स्थित छ भने सादा पृष्ठभूमि, तपाईं यो उपकरण रंग सम्पादक प्रयोग गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम Windows मा चलिरहेको कुनै पनि घर कम्प्युटरमा उपलब्ध छ। त्यसपछि "मानक" को बिन्दु जाने, "सबै कार्यक्रम" - यसलाई खोल्न, तपाईं क्लिक गर्न "सुरु" आवश्यक छ।
कसरी रंग मा छवि देखि लेबल हटाउन?
त्यसैले तपाईँले अनुप्रयोग फेला र यसलाई खोल्न गर्नुभएको छ। के अर्को? त्यसपछि हामी वस्तु "खुला" मा मुख्य मेनु र क्लिक जाने, हाम्रो छवि खोल्नुहोस्। यसलाई स्थित छ जसमा फोल्डर मा इच्छित तस्बिर चयन गर्नुहोस्।
रंग मा लेखिएको हटाउन, तपाईंले बस पृष्ठभूमि को एक भाग प्रतिलिपि र उनको प्याच मा राख्दै द्वारा। यो गर्न, "चयन गर्नुहोस्" वस्तु अन्तर्गत त्रिकोण मा क्लिक गर्नुहोस्। मेनु देखाउनुहोस् मा, उपकरण "आयताकार क्षेत्र" चयन गर्नुहोस्। थप कर्सर त्यहाँ पृष्ठभूमि छवि मुक्त छन् जहाँ चित्र, को पार भाग धारण रूपान्तरित। त्यसपछि हामी माउस बटन (बायाँ) प्रेस र एउटा सानो आयताकार क्षेत्र चयन गर्नुहोस्। , परिणाम बक्समा कर्सर राख्नुहोस् माउस बटन क्लिक (दायाँ) र देखिने मेनु मा, वस्तु "प्रतिलिपि" चयन गर्नुहोस्।
अब हामी फेरि छवि मा कहीं क्लिक गर्नुहोस् र सही बटन थिच्नुहोस्। विन्डो मा, रेखा "टाँस्ने" चयन गर्नुहोस्। अब कसरी छवि देखि लेबल हटाउन हेर्न दिनुहोस्। यो गर्न, परिणाम प्याच मा क्लिक गरेर र माउस बटन (बायाँ) समातेर पाठ तान्नुहोस्। सायद, यो पूर्ण लेखिएको ब्लक गर्दैन। त्यसैले, यो सुत्छन् गर्न आवश्यक हुनेछ। यो गर्न, प्याच को कुना मा कर्सर ठाँउ हो। फलस्वरूप, यो एक विकर्ण निर्देशन तीर रूपान्तरित भएको छ। जब सम्म यो इच्छित आकार बढ्न गर्दैन माउस बटन पकड र पक्ष गर्न प्याच पुल (बायाँ), माथि वा तल। को अभिलेखमा पूर्ण बन्द भएको थियो भनेर यसको स्थिति समायोजन गर्नुहोस्।
"Photoshop" को सम्पादक
सफ्टवेयर सम्पादन "Photoshop" सम्म सबै भन्दा इमेजिंग आवेदन उद्देश्यले सबै को लोकप्रिय हो। व्यवसायीक (कलाकार र फोटोग्राफर टी। डी), अनि प्रशंसक रूपमा कार्यक्रम को अतिव्यापक प्रयोग। यो निःशुल्क सम्पादक छैन। तथापि, काम तिनीहरूलाई सबैभन्दा यस्तै कार्यक्रम संग भन्दा धेरै सजिलो छ। अनावश्यक पाठ मात्र monotonous, तर nonuniform पृष्ठभूमि बनावट संग हटाउन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पादन Photoshop® CS5
पहिलो, गरेको मा "Photoshop CS5» छवि देखि लेबल हटाउन कसरी हेरौं। यस संस्करणमा नमुना को अनावश्यक भागहरु को छुटकारा रही को विधि कार्यक्रम को पहिले संस्करण प्रयोग देखि अलि फरक छ। उहाँले एक सानो सजिलो छ र कम समय लाग्छ। पहिले संस्करण मा लेबल को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी जान्न, तल वर्णन।
कसरी Photoshop® CS5 मा लेखिएको हटाउन?
अधिग्रहण कार्यक्रम खोल्न र "फाइल" बटन क्लिक गर्नुहोस् - "खुला"। आवश्यकता समायोजन तस्बिर छान्ने। को अभिलेखमा संग सबै भन्दा राम्रो अनुभव गर्न, यो वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यो उपकरण "लेन्स" प्रयोग गरेर पूरा गर्न सकिन्छ।
अब कसरी छवि देखि लेबल हटाउन हेर्न दिनुहोस्। यो गर्न, एक नेभिगेटर उपकरण लिन "Lasso" वा "आयातकारचयन", र पाठ चयन गर्नुहोस्। अर्को नियन्त्रण प्यानल, गर्न ट्याब देखिन्छ कि मेनुमा "सम्पादन गर्नुहोस्" जाने लाइन चयन "भर्नुहोस्।" देखाउन संवाद बक्स स्क्रिनमा त्यसपछि "भर्नुहोस्"। यहाँ वस्तु चयन "प्रयोग गर्नुहोस्" "सामग्री-जागरूक" मा। - 100%, मोड - सामान्य अस्पष्टता: को "आवरण" मा निम्न सेटिङ प्रयोग गर्नुहोस्। अब ठीक बटन क्लिक गर्नुहोस्। चयन गरिएको क्षेत्र यी सबै manipulations को फलस्वरूप पृष्ठभूमिमा भरिन्छ।
को अभिलेखमा सम्पादक Photoshop® CS6 हटाउन
का कसरी "Photoshop सीएस 6" मा छवि देखि लेबल हटाउन हेरौं। यो Photoshop® CS5 मा जस्तै तरिकामा गरेको छ। "खुला" - पनि हामी आइटम मा "फाइल" क्लिक गरेर हाम्रो तस्वीर खोल्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तह र वृद्धि अनावश्यक लेखिएको पृष्ठभूमि प्रतिलिपि। कि पछि, "सम्पादन गर्नुहोस्" खण्डमा जानुहोस् - "भर्नुहोस्" र संवाद बक्स मा आवश्यक सेटिङहरू पूरा।
को "टिकट" उपकरण संग "Photoshop" सम्पादक अन्य संस्करण मा inscriptions कसरी हटाउने
तपाईं छवि देखि अनावश्यक भागहरु हटाउन कार्यक्रम को पहिले संस्करण मा "टिकट" उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम धेरै सरल छ, तर हेरविचार को एक निश्चित अनुपात आवश्यक छ। प्रतिलिपि गर्न साथै यो मामला मा पृष्ठभूमि पत्र।
त्यसैले, कसरी छवि उपकरण "टिकट" बाट लेबल हटाउन? यसको उपकरण "लेन्स" वृद्धि सुरु गर्न। लिन "टिकट" र कतै नजिकैको एक सर्कल पृष्ठभूमि को खाली क्षेत्र मा कर्सर राखे। को Alt कुञ्जीले तल पकड र चयन गरिएको साइट मा क्लिक गर्नुहोस्। यस सर्कलमा, कर्सर आकार मा कम हुनेछ, र क्रूसमा यसलाई भित्र देखिन्छ। अर्को, हामी यो लेबल मा सार्न। को Alt कुञ्जीले जारी, यो क्लिक गर्नुहोस्। फलस्वरूप, पृष्ठभूमिमा भाग लेबल को शीर्ष मा प्रतिलिपि गरिएको छ। चरण हामी सम्पूर्ण क्षेत्र भर्नुहोस् चरण समायोजन आवश्यक छ। शायद थिचिएको को Alt कुञ्जीले पृष्ठभूमिमा क्लिक छैन एक पटक छ। यस मामला मा, अन्त परिणाम धेरै neater हेर्न हुनेछ।
कसरी कार्यक्रम "Photoshop" क्लोन विधि मा लेखिएको हटाउन?
संपादक मा "Photoshop" क्लोन विधि हामी पेंट गर्न सुरुमा छलफल जसमा बाटो मिल्दोजुल्दो छ। को अभिलेखमा उपकरण "Lasso" वा "आयताकार क्षेत्र" प्रयोग गरेर हटाइएको छ। सबै आवश्यक छ - एक प्याच रूपमा सेवा गर्नेछन् जो पृष्ठभूमि, को भाग चयन गर्न। उपकरण "आयताकार क्षेत्र" बस चाहेको स्थानमा वर्ग सुत्छन्। को "Lasso" को प्रयोग गरेर, तपाईँले थप जटिल चयनहरू बनाउन सक्छ। परिणामस्वरूप प्याच नयाँ तह प्रतिलिपि गर्न। पनि उपकरण "Lasso" वा "आयताकार क्षेत्र" प्रयोग गरेर यो गर्न, लाइन चयन चयन गरिएको क्षेत्र माउस बटन (दायाँ) मा क्लिक गर्नुहोस् र विन्डो बाहिर कूद "नयाँ तह कपी।" पत्रहरु मा विन्डो नयाँ टालो प्रकट हुनेछ। को काम क्षेत्रमा यो हुनेछ प्रकाश पारिएको छ।
अर्को, हामी उपकरण "सार्नुहोस्" (कालो तीर) लिन र पाठ मा प्याच (उनको साथ बिस्तर मा रहेको) तान्नुहोस् गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा, यो थियो भने पूर्ण अधिलेखन ट्याब "सम्पादन गर्नुहोस्" जानुहोस् गर्नुपर्छ - "। फ्री रूपान्तरण" त्यसपछि, क्षेत्रीय को परिवर्तन मा वर्गहरूको एक मा माउस बटन (बायाँ) तल पकड, यो इच्छित आकार गर्न प्याच सुत्छन् गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, यो यस मामला मा तल तह मा स्थित छ जो पाठ, माथि थियो भनेर उत्प्रेरित हुनुपर्छ। यो परिवर्तन को क्षेत्र नछोडी गर्न सकिन्छ। पाठ बन्द भएपछि, प्रेस प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसैले, बरु चित्र मा लेखन देखिने अन्यसँग मर्ज पृष्ठभूमिमा मात्र टुक्रा, हुनेछ।
पछिल्लो चरण मा एक मा सबै तहहरू मर्ज हुनेछ। यो गर्न, माउस बटन (दायाँ) जहाँसुकै रेखाचित्र मा क्लिक गर्नुहोस् र मेनु हाइलाइट, "तहको मर्ज" चयन गर्नुहोस्। फलस्वरूप, लेखिएको थियो पहिले नै रिमोट एक पृष्ठभूमि हुनेछ।
त्यसैले, तपाईं शायद अब कसरी छवि देखि लेबल हटाउन बुझ्छु। "Photoshop" र अन्य ग्राफिक्स कार्यक्रम तपाईं केही क्लिक मा यो कार्य गरौं। रंग मा तपाईं प्याच, प्रतिलिपि चयन गरेर यो र यसको पाठ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै यन्त्र, संपादक "Photoshop" पहिले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि "टिकट" उपकरण painting को विधि साथ। स्वचालित रूपमा, हालतमा प्रयोग "सामग्रीहरू को दृश्य भर्नुहोस्।" - Photoshop मा, संस्करण CS5 सुरु हुने, हटाउन पनि सजिलो गरिन्छ
तपाईँको कम्प्युटरमा एउटा अलार्म कसरी सेट गर्न?
स्थापना, अनुकूलन सुविधा र सिफारिसहरू: CentOS7को अवलोकन
यस माइक्रोसफ्ट वर्ड 2010 कसरी सक्रिय?
सबैभन्दा सुन्दर नङ डिजाइन। दैनिक मैनीक्योर लागि विचार
Bocharova Elena पनि बडा समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ
Zaparivat अनाज आहार रूपमा?
कसरी शिशुहरू मा regurgitation देखि उल्टी भेद लागि: विशेषता सुविधाहरू
तयारी "Zaichonok" (सिरप): समीक्षा, रचना र सिफारिसहरू
होटल "कि.मी." (नोवोसिबिर्स्क): विवरण र समीक्षा
सफल शिकार पानी र जमीनमा बस्ने जनावर
"जादूगर गरेको अपरेंटिस": अभिनेताहरु, उत्पादन, आलोचकहरु को प्रतिक्रिया
दबाइ "Erespal" तपाईं खोकी के मा लिन? वयस्क र बच्चाहरु प्रयोगको लागि निर्देशन